Zlatan oo runta u sheegay Cavani: Waa inaad raacdaa sharciga u dagan kooxda”! – STAR FM SOMALIA
Weerar yahanka kooxda PSG Zlatan Ibrahimovic ayaa la taliyay weerar yahanka kula lamaansan booska weerarka ee Edinson Cavani.
Cavani ayaan ku qanacsanayn inuu la sii joogo kooxdiisa kadib markii uu ku dooday in laga doorbidayo isaga Zlatan Ibrahimovic wuxuuna ku cadaadinayaa kooxdiisa inay iska fasaxdo.
Kadib markii uu xalay ka caawiyay PSG inay 2-1 uga adkaato kooxda Toulouse koobka France ayuu yiri Zlatan Ibrahimovic:
“Markii aan joogay AC.Milan waxaa kooxda ku sugnaa ciyaartoy badan oo awood u yeelaya kooxda kana gacansiinaya guulaha, koox walba ayaana jecel inay haysato ciyaartoyda ugu awooda badan yurub”.
Zlatan oo u soo dhaadhacay talada Cavani iyo inuu u dul qaato isaga maadama PSG ay ku tiirsantahay ayuu yiri:
“Dhamaan waa in la raacaa sharciga u dagan kooxda, ma jiraan wax la dhibsado, waa wax iska caadi ah in koox walba ay leedahay hal ama 2-laacib oo kooxdu ay u baahantahay si ay heer sare uga gaarto yurub